फुटबल जगतका नामी खेलाडी मेसीको तस्वीर भाइरल बन्यो, इन्स्टाग्राममा बन्यो नयाँ किर्तिमान ! | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
फुटबल जगतका नामी खेलाडी मेसीको तस्वीर भाइरल बन्यो, इन्स्टाग्राममा बन्यो नयाँ किर्तिमान !
२०७८ श्रावण ४, सोमबार १९:५५:००
लियोनले मेसीले फुटबल दुनियाँको भेटरल खेलाडी मानिन्छ । लियोनेल मेसीले आफ्नो क्यारियरमा पहिलो पटक अर्जेन्टिनाका लागि कोपा अमेरिकाको उपाधि जितेर विश्वभर चर्चा भइरहेको बेला उनले अर्को नयाँ किर्तिमान बनाएका छन् । कोपा अमेरिकाको ट्रफीसँग खिचेको मेसीको तस्बीर सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा अहिलेसम्मकै सबै भन्दा बढी लाइक पाउने तस्वीर बनेको छ । इन्स्टाग्राम मेसीको सो तस्बीरले २ करोड लाइक पाएको छ । मेसीको इन्स्टाग्राम फ्रोफाइल विश्वमै सबैभन्दा बढी हेरिने प्रोफाइलमा पर्दछ ।
अलि नाम चलेका खोलाडीहरुले सामाजिक संजालमा राखेका तस्विरहरु प्रायशः भाइरल हुने गर्दछ । एक रिपोर्टका अनुसार मेसीले पोष्ट गरेको सो तस्बीर २४ घण्टामा २३२ मिलियनले हेरेका थिए । इन्स्टाग्राममा यसअघि सबैभन्दा बढी लाइक गरिएको तस्बीर भने क्रिस्टियानो रोनाल्डोको रहेको थियो । रोनाल्डोले २०२० को नोभेमब्र ५ मा अर्जेन्टिनाका लिजेण्ड म्यारोडोनालाई श्रद्धान्जली दिएको तस्बीरलाई एक करोड ९८ लाख जनाले लाइक गरेका थिए । रोनाल्डोको यो रेकर्डलाई मेसीले तोडेका छन् ।
अर्का खेलाडी रोनाल्डो पनि केही कुरामा कम छैनन् । उनको इन्स्टाग्राममा मेसीको भन्दा धेरै फलोअर रहेका छन् । रोनाल्डोको अहिले इन्स्टाग्राममा ३१५ मिलियन फलोअर रहेका छन्, रोनाल्डो इन्स्टाग्राममा धेरै फलोअर हुने मध्ये पहिलो स्थानमा रहेका छन् । तर मेसीको भने इन्स्टाग्राममा २३३ मिलियन फलोअर रहेका छन् ।
टोकियो ओलम्पिकमा आज २६ स्पर्धाको फाइनल खेल हुँदै
राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले किन माफी...